Famatsiana herinaratra azo ovaina: inona izany, ny fomba fiasan'izy io, inona izy io | Fitaovana maimaim-poana
Famatsiana herinaratra azo ovaina: inona izany, manao ahoana ny asany, inona no ilana azy
Isaac | 14/09/2021 09:00 | Fitaovana elektronika
Ny iray amin'ireo zavatra ilaina indrindra sy ilaina indrindra amin'ny studio na atrikasa elektronika dia a famatsiana herinaratra tsy azo ovaina. Amin'izany no ahafahanao manome sakafo ireo karazan-tsambo rehetra, ahafahanao mampihatra tady sy hery hafa izay fehezina mora foana. Ka afaka manadino ny hafa ianao bateria na adaptatera manokana ho an'ny faritra tsirairay.
Una famatsiana herinaratra manerantany ho an'ny tetikasanao rehetra. Ho fanampin'izany, tsy ampiasaina hampiasa herinaratra fotsiny izy io, fa azonao ampiasaina ho fitaovana fitsapana koa, satria ho hitanao raha singa fototra na mandeha tsara ny fizaran-tany rehefa mikasika azy ireo amin'ny tendrony andrana ...
1 Inona no famatsiana herinaratra tsy mety simba?
1.1 Ahoana ny fomba hisafidianana endri-tsoratra mety tsy azo ovaina
2 Famatsiana herinaratra tsy azo ovaina kokoa
Inona no famatsiana herinaratra tsy mety simba?
Momba ny inona ny famatsiana herinaratra, sy ny fitsipiky ny fiasa, efa naneho hevitra momba ity bilaogy ity izahay. Na izany aza, rehefa miresaka a famatsiana herinaratra tsy azo ovaina, Misy fahasamihafana kely amin'ny mahazatra.
Ny famatsiana herinaratra dia fitaovana afaka manome angovo herinaratra amin'ny faritra na singa. Eny, rehefa miresaka momba loharano tsy azo ihoarana izy dia iray izany ao Ny voltages dia azo ahitsy ao anaty elanelana iray, ary na ny onja aza. Ka tsy hanana famoahana raikitra ny 3v3, 5v, 12v, sns, fa afaka mifidy izay hery ilainao ianao.
Ahoana ny fomba hisafidianana endri-tsoratra mety tsy azo ovaina
Mba hisafidianana famatsian-jiro tsy mety simba tsara dia tsy maintsy manatrika anton-javatra maromaro ianao tokony handinika ianao. Azonao atao ny mividy ny vokatra mifanaraka amin'ny ilainao indrindra:
teti-bola: ny zavatra voalohany dia ny mamaritra hoe ohatrinona ny vola tianao holaniana amin'ny famatsiana herinaratra azo ovaina, satria amin'ity fomba ity dia afaka mandeha amina modely manokana ianao ary manafoana izay rehetra tsy takatry ny sainao.
zavatra ilainaNy zavatra manaraka dia ny famaritana ny zavatra hampiasanao ny famatsiana herinaratra tsy azo ovaina, raha toa ka ho an'ny mpanamboatra na ny tetikasa DIY indraindray, na raha ny laboratoara matihanina kokoa, ho an'ny fampiasana matihanina amin'ny atrikasa elektronika, sns. Io koa dia hamaritra raha mila zavatra azo itokisana sy lafo kokoa ianao, na raha afaka mianina amin'ny iray tsotra kokoa ianao.
marca: misy marika maromaro miavaka mihoatra ny ambiny. Nefa tsy tokony ho variana amin'izany koa ianao. Matetika, raha marika fanta-daza kokoa izy io dia hanana antoka bebe kokoa amin'ny kalitao sy fanohanana tsara kokoa raha sendra misy zavatra miseho.
Toetran'ny teknika: Tena manokana io, ary hiankina amin'izay tadiavinao izany. Saingy eritrereto hoe inona avy ny tadin'ny voltages sy ny onjan-tadiavinao matetika, mba hifanaraka amin'izany. Ny fahefana manohana (W) dia manan-danja ihany koa.
Famatsiana herinaratra tsy azo ovaina kokoa
Raha mitady ianao famatsiana herinaratra tsy mety simba, eto dia azonao atao ny mahita ny maodely sy marika marobe atolotra indrindra:
PeakTech 1525: dia marika tena matoky sy matanjaka amin'ny famatsiana herinaratra tsy azo ovaina. Ity maodely ity dia afaka mandeha 1-16 volts mivantana ankehitriny, ary amin'ny 0-40A ny hamafiny, na dia misy maodely lafo vidy hafa mety hahatratra 60A aza. Izy io dia manana efijery LED izay ahafahanao mamaky ny angovo ankehitriny sy ny sanda ankehitriny, ary koa ny rafitra fampangatsiahana manan-tsaina mampiasa mpankafy, ary preset 3 azo atao.
Baugger Wanptek Nps1203W: iray hafa amin'ireo maodely tsara indrindra amin'ny loharano azo ovaina, miaraka amina famoahana 0-120v DC, ary 0-3A. Miaraka amin'ny fisehoana dizitaly mba hahitanao tsara ny sanda omena, ny habeny, ny azo antoka ary ny fifehezana ny tanana tsotra.
COODEN Key: famatsiana herinaratra tsotra azo ovaina izy io, mety ho an'ny fampiasan'ny fialamboly sy ny laboratoara ary ny foibe fanabeazana. Izy io dia misy fampisehoana nomerika hijerena ny soatoavin'ny famatsiana, ary azo fehezina amin'ny 0-30 volts sy 0-10 amps amin'izao fotoana izao.
Uniroi DC: Ity loharano ity dia mamela fanitsiana avy amin'ny 0 ka hatramin'ny 32 volts, ary amin'ny 0 ka hatramin'ny 10.2 amps. Miaraka amin'ny marimaritra iraisana 0.01v sy 0.001A. Miaraka amin'ny fisehoana LED lehibe sy matevina, fifehezana ny mari-pana mahira-tsaina ary azo antoka.
Ny RockSeed RS305P: famatsiana herinaratra azo ovaina miaraka amin'ny fahafaha-manitsy 0-30V, ary 0-5A. Miaraka amin'ny fampisehoana LED 4-nomerika, 6-set, fandrosoana mandroso, fahatsiarovana, ary ny fahaizana mifandray amin'ny PC amin'ny alàlan'ny tariby USB hifandraisana amin'ny rindrambaiko mifanaraka amin'ny Windows ihany.
Hanmatek HM305: endri-tsoratra mitovy amin'ilay teo aloha, manana habe mifatotra, tsotra ary mora kokoa. Ahitana ny efijery LED hijerena ny sanda ankehitriny sy ny angovo. Izy io dia mamela ny fanitsiana mora ny malefaka eo anelanelan'ny 0-30V sy ny ankehitriny eo anelanelan'ny 0-5A. Misy karazana hafa mety hiakatra hatramin'ny 10A.
Kaiweets cc: ity maodely hafa ity koa dia iray amin'ireo tsara indrindra, miaraka amin'ny famatsiana mivantana ankehitriny ary miaraka am-pitandremana tsara ny fifehezana ny vokatra. Afaka mandeha 0 ka hatramin'ny 30V ary 0 hatramin'ny 10A. Izy io koa dia manana fisehoana LED sy seranan-tsambo USB 5v / 2A.
EventekIzy io dia iray amin'ireo marika tsara indrindra amin'ny famatsiana herinaratra tsy azo ovaina any, ary manintona ny vidiny. Ity maodely ity dia mamela ny fifehezana amin'ny 0 ka hatramin'ny 30 volts, ary amin'ny 0 ka hatramin'ny 10 amps. Miaraka amin'ny fampisehoana LED 4-tarehimarika lehibe, habe marevaka, azo itokisana sy azo antoka ary miaraka amin'ny tariby alligator / tsipika fitsapana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fitaovana elektronika » Famatsiana herinaratra azo ovaina: inona izany, manao ahoana ny asany, inona no ilana azy